Nanatanteraka fihaonam-be nampivondronana mpisehatra maro ny BUCAS Antanimena ny 28 sy 29 septambra 2017 lasa teo ho entina hitadiavam-bahaolana amin’ny fahapotehan’ny voaary.
Doro tanety, famotehana ny ala, fitrandrahana tsy ara-drariny, izany no herisetra mianjady amin’ny tontolo iainana eto Madagasikara. Eo koa ny tsy fahandriam-pahalemana, ny fahantrana lalina ary ny kolikoly ka zary mandrendrika ny firenana. Manoloana izany, ho fandraisana anjara amin’ny fampivoaram-piainan’ny Malagasy, ny BUCAS EKAR (Birao fandrindrana ny asa sosialy), dia nametraka ho laharam-pahamehana ny « Fivoizana ny fifanakalozan-kevitra ho amin’ny fitantanana tsara ny harena voajanahary » (ny ala, ny rano, ny tany). Fampivondronana ny mpisehatra samihafa toy ny tompon’andraikitra avy amin’ny fanjakana, ny avy amin’ny kaominina, ny mpikaroka, ny mpandraharaha ara-toekarena, ny mpandraharaha avy any ambanivohitra, ny mpanjifa, ny tantsaha ary ny mpanakanto. Hifanakalo hevitra ho amin’ny fitantanana mahomby ny harena voajanahary. Ambonin’izany, ny fanomezan-danja ny mponina eny ifotony mivelona amin’izany.
Nandritra ny roa andro no nanatanterahana ny hetsika dia nisy hatrany ny fifanakalozana sy loabary an-dasy. Nijerena ny olana fototra mahatonga ny fahapotehan’ny ala. Ny paikadim-pirenena mikasika ny fiarovana izany sy ny fitrandrahana angovo vaovao azo asolo ny arina no nifantohana. Nandray anjara tamin’ity hetsika ity ny avy amin’ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Ekolojia ary ny Ala, ny Ministeran’ny Rano, ny angovo ary ny solika. Nandray anjara mavitrika koa ny fikambanan’ny mpitrandraka ala Malagasy, ny FAFAFI Fianarantsoa mikasika ny BIOGAZY. Ary ny vaomiera sosialy sy ny tantsaha miara-miasa amin’ny BUCAS ihany koa. Nisy ny fifampizarana traikefa teny amin’ny trano heva niarahana tamin’ny BIMTT, ny METEO Madagascar, ny ADES (fatana mitsitsy), ny 3M, ary ny “Etablissement ROBENS”. Tao koa ny fanentana sy fifampizarana ara-kolontsaina niarahana tamin’i Dama sy ny tarika Lolo sy ny tariny.
Tsiahivina fa mbola miankina tanteraka amin’ny fampiasana ala ny 93% n’ny Malagasy. Miharihary anefa ny fahapotehana ateraky ny tsy fandraisan’andraikitry ny tsirairay manoloana izany. Araka ny antontan’isa nentin’i Dr Guybertho Randrianarivelo dia isan’ny fototra mahapotika ny ala ny fitrandrahana harenan-kibon’ny tany, ny fanakatonana ny Birao ifoton’ny fananan-tany, ary ny hakelin’ny vola miditra amin’ny fanjakana. Ambonin’izany, ny fitomboan’ny filan’ny mponina amin’ny ankapobeny. Hany ka tsy maharaka ny tinady ny tolotra. Mahatratra hatramin’ny 36 000ha isan-taona ny fahapotehana, raha 16 000ha ihany ny hazo voavoly.
Mila mandray andraikitra ny malagasy tsirairay
Maro ny soso-kevitra notsoahina nandritra ny fifanakalozana tao anatin’ny roa andro. Ao anatin’izany ny fametrahana ny paikady fanaraha-maso ny vokatry ny ala sy ny fivezivezeny. Teo ihany koa ny famindram-pitantanana amin’ny Vondron’Olona Ifotony (VOI), ny fanamafisana ny ady amin’ny doro tanety sy doro ala. Ambonin’izay, ny fandrafetana drafitrasa maharitra sy ny torolalana ara-tekinika hoan’ny fitantanana ny ala.
Ankoatra izay, betsaka ny manao fitrandrahana tsy ara-dalàna ka tsy manaja ny lamina napetraka. Misy araka izany ny fifaninanana tsy ara-dalàna amin’ireto farany sy ny mpitrandraka ara-dalàna ka tokony hojerena akaiky ny momba izany. Ho an’ny angovo azo hasolo ny arina, misy ny fatana mitsitsy izay manena ny arina ampiasaina. Toy izany koa ny fampiasana entona BIOGAZY, ny “ethanol”, ny fampiasana ny herin’ny masoandro sy ny maro hafa.
Isan’ny fanombohana fiaraha-miasa tamin’ny mpikatroka sy mpisehatra maro nasaina iny fihaonam-be notanterahan’ny BUCAS iny. Marihina fa tsy mijanona hatreo ny fitadiavam-bahaolana amin’ny fahapotehan’ny tontolo iainana. Mbola maro ny vaha olana tsara sy tokony hotrandrahana ankoatra ny efa misy. Saingy, very maina fotsiny ihany izy ireny raha tsy ny toe-tsain’ny tsirairay mihitsy no miova sy hahatsapa ny hahasarobidin’ny tontolo iainana.